नयाँ वर्ष २०७८ मा घुम्नै पर्ने बागमती प्रदेशका १० उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यहरू - Our Tourism News
२०७८ बैशाख ४, शनिबार | २०७८ आश्विन ३० | ourtourismnews@gmail.com
नयाँ वर्ष २०७८ मा घुम्नै पर्ने बागमती प्रदेशका १० उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यहरू
नयाँ वर्ष आउनासाथ हामीले घुम्ने योजना बनाउदछौँ । नेपालमा घुम्ने ठाउँहरु धेरै नै छन् । तर घुम्ने ठाउँहरुको सम्प्रर्ण जानकारी नहुँदा हामी कहाँ जाने भनेर अलमलिरहेका हुन्छौँ । परिवार तथा साथीभाइसँग घुम्न जाने ठाउँबारे प्रष्ट रुपमा थाहा नपाउदा रमाइलो गर्न जाँदा सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था आउन् सक्छ । त्यसैले नयाँ वर्ष २०७८ सालमा बागमती प्रदेशमा घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ भने हामीले प्रदेशमा रहेका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरुका बारेमा आवश्यक जानकारी पस्किएका छौंः
पर्यटकको पहिलो गन्तव्य काठमाडौँलाई खुल्ला सङ्ग्रहालयको रूपमा नै लिन सकिन्छ । काठमाडौँमा घुम्नको लागि विश्वसम्पदा सूचीमा परेका ७ वटा सम्पदाहरू रहेका छन् । यसले काठमाडौँ शहरलाई विश्वप्रसिद्ध शहरको रूपमा चिनाएको छ । यो नेपालको राजधानि हो यस ठाउँ भएर देशका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरुमा जाने गरिन्छ । यस ठाउँको प्रमूख तीर्थधामको रुपमा पशुपतिनाथ, गुहेश्वरी, स्वयम्भू, बौद्ध, बुढानिलकण्ठ, दक्षिणकाली, हनुमानढोका, गोकर्ण, टेकू, शालिनदी आदि हुन । यो ठाउँ प्राचीन कला, कौशल, संस्कृति, सभ्यता एवं ऐतिहासिक श्रोतको भण्डार पनि हो । देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसै क्षेत्रमा रहेको छ । आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकका लागि यो क्षेत्र पहिलो गन्तव्यको रुपमा रहेको छ । यहाँ घुम्नको लागि नागार्जुन, शिवपुरी, चन्द्रागिरी र किर्तीपुर उपयुक्त स्थान हुन ।
भक्तपुर जिल्ला एक धार्मिक, साँस्कृतिक, पूरातात्त्तिक तथा पर्यटकीय जिल्ला हो । ऐतिहासिक तथा सास्कृतिक रुपमा अब्ल रहेको भक्ततपुर आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकका लागि घुम्नलाई उपयुक्त गन्तव्य हो । भक्तपुर जिल्लामा भक्तपुर दरबार, नगरकोट, चाँगुनारायण मन्दिर, सूर्यविनायक मन्दिर, ठिमि दरबार क्षेत्रको पानोरोमिक, भुपति मल्लको शालिक, पचपन्न झ्याले दरबार, भैरवनाथ मन्दिर पर्यटकीय गन्तव्य हुनु ।
ललितपुर एक ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र हो । यहाँ पर्यटनको लागि घुम्ने स्थानहरु धेरै छन् । यस जिल्लामा घुम्नको लागि नजिको स्थल भनेको गोदावरी पार्क हो । यसका अलवा लाकुरी भन्ज्याङ बाट विहान को उदाउदो सूर्य तथा साझँको अस्ताउदो सूर्यको दृश्य हेर्ने सकिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाको भ्यू हेर्नको लागि यस स्थानमा टावर निमार्ण गरिएको छ । अर्को पर्यटकीय स्थल हो फुल्चोकीको डाडाँ यहाँबाट पनि दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । विशेष रुपमा यो ललितपुरको सबैभन्दा अग्लो स्थान हो । यहाँ भ्यु टावर नभएपनि उपत्यकाको र हिमशृंखलाको राम्रोसँग अवलोकन गर्न सकिन्छ । यस्तै अर्को पर्यटकीय स्थल हो नल्लुको लभडाँडा र पाथीभराबाट पनि काठमाडौं उपत्यकाका हिमशृंखलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । यस्तै, दलचोकी अर्को यस्तो स्थान हो, जहाँबाट उत्तरतर्फ लहरै हिमशृंखला देख्न सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको दृश्यपान गर्न सकिने यस स्थानबाट दक्षिणतर्फ तराईको रौतहटदेखि वीरगन्जसम्म देख्न सकिन्छ । यो ललितपुरको सबैभन्दा उपयुक्त दृश्यावलोकन स्थल हो ।
४. चितावनको सौराह
आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको तेस्रो गन्तव्य हो चितावनको सौराह । बागमती प्रदेशको एक उत्कृष्ट्र गन्तव्यको रुपमा रहेको सौराह विशेष रुपमा जंगल सफारीका लागि परिचित छ । यहाँ विश्वमै दुर्लभ एकसिंगे गैंडा पनि रहेको छ । सामुदायिक वनमा नै गैंडाको राम्रो वासस्थान भएकाले यहाँ घुम्न जाने पर्यटकहरु गैंडा देखेर रमाउने गर्दछन् । यसका अलवा यहाँ हात्ती तथा जिप सफारी मार्फत जंगल घुम्ने र जनावरको अवलोकन गर्न सकिन्छ । काठमाडौंबाट नजिकको गन्तव्य भएकाले पनि चितवन तथा नवलपरासी पर्यटकका लागि पहिलो रोजाइ हुने गरेको छ । यस ठाउँमा वाइल्डलाइफ टुरिजम को मज्जा लिन सकिन्छ । न्यजन्तुको वासस्थान वरपर गएर तिनलाई हेरेर आनन्द लिनु नै ‘वाइल्डलाइफ टुरिजम’ हो । विगतमा अफ्रिकामा मात्र हुने यो पर्यटन नेपालमा पनि स्थापित भइसकेको छ । नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वाइल्डलाइफ पर्यटन विश्वमा नै अब्बल रहेको प्रमाणित भइसकेको छ । धेरै अन्तर्रा्िष्ट्रय संस्थाहरूले यसलाई ‘एसियाको अफ्रिका’ को रूपमा वर्णन गर्ने गरेका छन् ।
५. रसुवा गढी
बागमती प्रदेशको रसुवा जिल्ला पर्यटकीय तथा व्ययापरिक हिसावले महत्वपूर्णा क्षेत्र हो । नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा रहेको रसुवागढी समुद्र सतहदेखि करिब ६००० फिटको उचाइमा अवस्थित छ । पर्यटन गन्तव्यको हिसाबले यो जिल्ला अघि रहेको छ । ऐतिहासिक, पर्यटकीय महत्वको रुपमा गोसाईकुण्ड, टे«किङका लागि लामलाङ क्षेत्र, नाग्थली, पार्वति कुण्ड र रसुवागढी रहेका छन् । काठमाडौँको सबैभन्दा नजिक पर्ने तिब्बततर्फको व्यापारिक नाका हो । यहाँबाट तिब्बततर्फको केरूङ बजार जान सकिन्छ ।
६. दोलखाको कालिञ्चोक
बागमती प्रदेशको पर्यटकीय गन्तव्य हो दोलखाको कालिञ्चोक । कालिञ्चोक भगवती मन्दिर पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्यको स्थल को रुपमा परिचित छ । कालिञ्चोक पुग्दा सेता हिमाललाई आँखै अगाडि देख्न पाइन्छ । ३८४२ मिटरको उचाईमा रहेको कालिञ्चोक भगवती मन्दिरबाट ठूला ठूला पहाड देख्न सकिन्छ । त्यहाँबाट देखिने मनोरम दृश्यले सबैको मन लोभ्याउँछ । पर्यटनको लागि उत्कृष्ट गन्तव्यको रुपमा रहेको कालिञ्चोक जानको लागि काठमाडौँबाट १३३ किमि उत्तरपुर्व को दुरि मा चरिकोट पुगिन्छ भने र त्यहाबाट दुई घण्टाको कच्ची बाटो हुदै कालिन्चोको कुरी बजार पुगीन्छ । त्यहाँ देखि केबुलकार तथा एक घण्टाको उकालो पैदल यात्रा पछि कालिञ्चोक भगवती मन्दिरमा पुगिन्छ ।
नेवार जातिको परमपरागत प्राचीन बस्ती तथा हिमशृङ्खलाको मनोरम दृश्य देख्न सकिने बागमती प्रदेशको काभ्रे जिल्लामा अवस्थित धुलिखेल एक पर्यटकीय गन्तव्य हो । धुलिखेलबाट पूर्व केरियोलुङ र पश्चिममा हिमालचुलीका हिमशृङ्खलाको मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ । काठमाडौँदेखि ३० कि.मि. पूर्वमा रहेको धुलिखेलमा हजारसिढि, पातलेखेत, पलाञ्चोक, नववुद्ध पर्यटकीय क्षेत्र हुन । यहाँ जानकोलागि काठमाडौँको रत्नपार्क बसपार्कबाट बिहान देखि साझ ६ बजे सम्म गाडि चढेर जान सकिन्छ ।
८. नुवाकोट दरबार
ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र हो नुवाकोटको साततले दरवार । यो दरबारको उचाइ ७५ फिट, लम्बाई ५० फिट र चौडाइ करिब ३९ फिट रहेको छ । धातुको छाना भएको यो दरबारका अरु सामग्री तेलिया इँटा र काठमा शूक्ष्म र विस्तृत कलात्मक शैलीमा कुँदिएको छ । झ्याल, ढोका, थाम, निदाल, दलिन, टुँडाल आदि काठबाट बनेका छन् । काष्ठकलामा भएको मार्मिकताले दरबारको सुन्दरतालाई मात्र बढाएको छैन, पुरातत्वको एउटा अनुपम उदाहरण पनि बनेको छ । दरवार परिसर करिब ९ सय ७० मिटर उचाईमा रहेको छ । जुन कारण दरवार परिसर प्राकृतिक भ्यु–टावर पनि बनेको छ । यहाबाट रानीपौवा, थानसिंङ फाट, ढिकुरेफाट, विदुर बजार, पिपलटार, बट्टार, सामरी भञ्ज्याङ, खड्क भञ्ज्याङ, जिलिङ लगायत दर्जनौ गाउँ र बस्तीहरु अवलोकन गर्न सकिन्छ । जुन गाउँ र भञ्ज्याङको बिचमा बग्ने त्रिशूली र तादी खोलाले सिगार दिएको छ । यहाँ पुग्न सरदमुकाम विदुरबाट ५ किलोमिटर नागवेली उकालो मोटरमा यात्रा गरेपछि नुवाकोट साततले दरवार पुगिन्छ ।
९. सिन्धुली गढी
पर्यटकहरु जहिले पनि नयाँ कुरा र ठाउँमा आकर्षित हुन्छन् । आफुले नदेखेको ठाउँ पुग्ने पर्यटकहरुको इच्छा हुन्छ । कतिपय अवस्थामा पर्यटकहरुलाई कुनै ठाउको बारेमा बनाइएको गीत अथवा कुनै लेखकले लेखेको लेख र पुस्तकले पनि पर्यटकहरुलाई ती ठाउँमा घुमफिर गर्न मन लाग्छ । पर्यटनको लागि अन्तव्यको रुपमा रहेको सिन्धुली जिल्लाको सिन्धुली गढी ऐतिहासिक गढी यो । यहाँ बाट गढीको साथै तराईको मनोरम फाँट र उत्तरका हिमालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न पाईन्छ । यहाँ पूर्खाको विरताको इतिहास हेर्न र गर्मी छल्न धेरै जसो आउने गर्दछन । यस ठाउँमा जानको लागि काठमाण्डौको कोटेश्वरबाट जिप, भ्यान, हाइस वा बस जान्छ । वीपी राजमार्गको सोलाभञ्ज्याङबाट गढी पुग्ने बाटोलाई स्तरीकरण गरिएको छ । अहिले सिँढी उक्लिएर १० मिनेटमा र आफ्नै सवारी साधन भए ५ मिनेटमा गढी पुग्न सकिन्छ ।
१० धादिङको रुवी भ्याली
धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको रुवी भ्याली पर्यटन गन्तव्यका लागि उपयुक्त रहेको छ । तपाईसंग लामो विदाको समय छ भने एक पटक पुग्नुहोस । यो ठाउँ प्राकृतिक, धार्मिक, सास्कृतिक, साहसिक हिसावले निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । विशेष रुपमा यस ठाउँ टे«किङ गर्नका लागि उपउक्त छ । आँखै अगाडि टल्क टल्कने गणेश हिमाल तथा वरिपरि देखिने जल,जंगल ले यस ठाउँमा आउनेको मन नै परिवर्तित गराउँछ ।